Ny iPhone 13 sy izay rehetra natolotr'i Apple ao amin'ny Keynote | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 16/09/2021 12:32 | Events, General
Ny orinasa Cupertino dia nahita fa mendrika hankalazana izany #AppleEvent fanao isan-taona izay ampisehoany amintsika ny maha-lohany azy amin'ny resaka telefaona finday, ny iPhone. Amin'ity tranga ity, ny zoro iPhone 13 dia naseho endrika vaovao maro, saingy tsy irery izany, mazava ho azy.
Ho fanampin'ny iPhone 13, Apple dia nanolotra ny Apple Watch Series 7 sy ny AirPods an'ny taranaka fahatelo, andao jerena ny vokatr'izy ireo. Ampahafantaro anay amin'ny alalany kokoa ireo fitaovana kasain'ny Apple hanjakan'ny tsena mandritra ity taona 2021 ity sy ny ankamaroan'ny taona 2022, ho fanavaozana ve ireo vokatra ireo?
1 iPhone 13 sy ny karazany rehetra
2 Apple Watch Series 7, ny revolisiona lehibe indrindra
3 IPad Mini vaovao sy ny fanavaozana ny iPad 10.2
iPhone 13 sy ny karazany rehetra
Andao aloha hanomboka amin'ity iPhone 13 ity sy ireo fiasa rehetra hifampizaran'izy ireo. Ny voalohany dia ny processeur A15 Bionic malaza, ity mpiorina voatokana novokarin'ny TSMC ity Izy io dia mikendry ny ho matanjaka indrindra eny an-tsena noho ny teknolojia GPU sy ny heriny manta. Amin'ny lafiny iray, ny fitaovana rehetra dia hanana ny vaovao Ny Face ID 2.0 sy ny notch dia niova habe hatramin'ny 20% kely kokoa mba hampiasa tsara kokoa ny habaka ary hanome fiarovana bebe kokoa rehefa manokatra ny tarehy, lafin-javatra iray izay notadiavin'ny mpampiasa fatratra, miaraka amin'ny fanamafisam-peo miditra amin'ny sisin'ny efijery.
Etsy ankilany, ankehitriny ny iPhones rehetra dia hanana fiampangana 18W mitovy amin'ny alàlan'ny tariby sy 15W amin'ny alàlan'ny MagSafe, ary koa ny fampidirana ao amin'ny fanavaozana ny vokatra MagSafe, mifanentana amin'ny kinova taloha amin'ny charger tsy misy tariby izay namboarin'i Apple ho lamaody. Toy izany koa, momba ny fifandraisana tsy misy tariby Apple dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny tambajotra WiFi 6E, fivoarana kely amin'ny tambajotra WiFi 6 fanta-daza, manatsara ny fitoniana sy ny fandefasana data, ka mametraka azy ho fitaovana mitarika eo amin'ity haitao ity.
Noho ny antony mazava, Apple miloka amin'ny takelaka OLED ho an'ny fitaovany rehetra, amin'ny tranga misy ny iPhone 13 Mini dia ho 5,4 santimetatra izy io, manomboka amin'ny 6,1 santimetatra ho an'ny iPhone 13 sy iPhone 13 Pro ary tafakatra 6,7 santimetatra amin'ny fanontana Pro Max an'ny iPhone 13. Toy ny miavaka Toetoetra, ny iPhone ao anatin'ny sakany Pro dia hanana tahan'ny famelomana 120 Hz, iray amin'ireo toetra mampiavaka indrindra takian'ireo mpampiasa tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Raha ny amin'ny fahaiza-mitahiry tonga tokoa ny fampiasana 128 GB ho fenitra.
Toy izany koa no mitranga amin'ny batterie, miloka Apple ny fahaiza-manao mAh avo indrindra izay efa fanaonao hatrizay, eny, tsy hanolotra charger tafiditra ao anaty boaty iPhone izy io.
Amin'ny ankapobeny dia misy fiovana ao amin'ny fakantsary lehibe izay a Wide Angle dia manana MP 12 miaraka amina aperture f / 1.6 ary rafitra fampiorenana sary optika (OIS). Ny sensor faharoa dia a 12 MP Ultra Wide Angle izay amin'ity tranga ity dia afaka misambotra hazavana 20% bebe kokoa noho ny kinova taloha tamin'ny fakantsary ary misy aperture f / 2.4. Izany rehetra izany dia hahafahantsika mirakitra an-tsoratra amin'ny 4K Dolby Vision, amin'ny Full HD hatramin'ny 240 FPS ary manararaotra ny maody "cinematic" izay manampy effets nanjavozavo ny zavatra nosoratany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, fa hatramin'ny 30 FPS ihany no mirakitra izany.
iPhone 13 / Mini: sensor lehibe + Angle Ultra Wide
iPhone 13 Pro / Max: Main Sensor + Ultra Wide Angle + Telephoto fanamafisana telo + LiDAR
Miaraka amin'ny vidiny eo anelanelan'ny 709 sy 1699 euro Miankina amin'ny fitaovana nofidina, afaka tahiry izy ireo amin'ny 16 septambra, miaraka amin'ny fandefasana voalohany manomboka amin'ny 24 septambra.
Apple Watch Series 7, ny revolisiona lehibe indrindra
Ny Apple Watch dia nanana famolavolana azo fantarina izay novaina kely fotsiny nandritra ny taona maro, namorona fenitra marika sy andiana fironana izay nametraka ny tenany ho lohandohan'ny marika. Na izany aza, nanapa-kevitra ny Apple fa tsy hanavao ny famolavolana ny Apple Watch Series 7 hanome anao ny fahatsapana ny fitohizan'ny iPhone, iPad ary MacBook tadiavinao. Toy izao no nametrahan'ny Apple ny curves an'ny Apple Watch hanolotra famolavolana izay mitovy amin'ny an'ny Apple Watch Series 6, mazàna amin'ny tranga misy, satria efa mahatratra ny farany izao ny efijery ary azo jerena amin'ny sisiny, zavatra iray. ireo mpampiasa notakiany hatry ny ela.
Vitsy ny fisehoan-javatra vaovao amin'ny haavo teknika mihoatra ny processeur vaovao sy ny fahaiza-manao fanodinana, ireo singa ilaina amin'ny Apple Watch Series 6 sisa tavela, toy ny electrocardiogram sy ny altimeter. Betsaka ny vita tamin'ny sensor amin'ny maripanan'ny vatana izay tsy tonga akory. Ny karazany vaovao sy miloko isan-karazany dia tsy avy amin'ny fanavaozana ny habeny, na dia mihena 40% aza ny sisiny, na dia hanana kinova vy, titanium ary aluminium aza isika. Hanomboka amin'ny 429 euro ny vidiny ho an'ny kinova mavesatra indrindra amin'ny fitaovana ary hanohy hanana kinova amin'ny LTE izahay na hoferana amin'ny fifandraisana Bluetooth + WiFi miankina amin'ny filan'ny mpampiasa tsirairay. Mandritra izany fotoana izany dia tsy mbola nanome daty marina hanombohana azy i Apple, avelan'izy ireo hianjera izy io.
IPad Mini vaovao sy ny fanavaozana ny iPad 10.2
Voalohany dia misy iPad Mini vaovao izay mandova ny fiasan'ny iPad Air, efijery an-tsisiny misy sisiny manify sy zorony boribory, 8,3 santimetatra tsy misy Face ID miaraka, miaraka amin'ny Touch ID eo amin'ny bokotra herinaratra. Ao amin'ity iPad Mini vaovao ity dia manana ny vaovao A15 Bionic, mpikirakira izay hiakatra eny amin'ny iPhone 13 sy 13 Pro, ary koa ny fifandraisana 5G dia eo akaikin'ny tariby USB-C hampifandray kojakoja.
Mikasika ny iPad 10.2, mitazona ny vidiny izy ary tsy manao fanavaozana amin'ny ambaratonga famolavolana, fa kosa hasiana fakan-tsary 12MP FaceTime vaovao miaraka amina sensor 122º Wide Angle ary ny processeur A13 Bionic an'ny Apple.
Ireo no vaovao rehetra natolotry ny orinasa Cupertino nandritra ny hetsika nataony androany, tsy ho ela dia azo jerena ao amin'ireo hevi-dehibe amidy ary koa amin'ny Apple Store ara-batana sy an-tserasera, na dia afaka manao famandrihana mahazatra aza ianao. Fantatra tokoa fa mazàna Apple dia manolotra tahiry "kely" amin'ireo fitaovana ireo amin'ny daty fanombohany, manantena izahay fa tsy hahita ny filaharana mahazatra ao amin'ny Apple Store toy ny tamin'ny vanim-potoana talohan'ny COVID.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny iPhone 13 sy izay rehetra natolotr'i Apple ao amin'ny Keynote-ny